कोही मानिस अचानक बेहोस भए तुरुन्त यसो गर्नुहोस् - TV Annapurna
March 21, 2018 March 21, 2018 Annapurna TV
डा. ओममूर्ति अनिल मुटुरोग विशेषज्ञ ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल,
बेहोसीका ३ कारण विशेषगरी मानिस तीन कारणले बेहोस हुने गर्छन् । पहिलो हो, मस्तिष्कका कारण । मस्तिष्कमा इपिलेप्सी हुँदा, ट्युमरलगायतको कारणले बोहोस हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मानिस बेहोस भए पनि रक्तसञ्चारचाहिँ हुन्छ । किनकि त्यतिवेला मुटुले काम गरिरहेको हुन्छ । यसरी बेहोस भएको मानिसको हात–खुट्टा चल्ने, जिउ तन्किने, मुखमा फिज आउने, मुखबाट फिज आउनेलगायत हुन्छ । यसरी बोहोस भएका मानिसको नाडी र पल्स पनि चलेको हुन्छ ।
के गर्ने ? बेहोस भएका मानिसलाई रिकभरी पोजिसनमा राख्न जरुरी हुन्छ । जसका लागि पहिला बेहोस भएको मानिसलाई देब्रे कोल्टो पारेर सुताउनुपर्छ । र, देब्रे खुट्टालाई सीधा पारी दाहिनेलाई खुम्च्याइदिनुपर्छ । त्यस्तै, देब्रे हातलाई खुम्च्याउनुपर्छ र दाहिनेलाई चिउँडोको तल राख्नुपर्छ । यदि छारेरोगजस्तो समस्याका कारण बेहोस भएको अवस्थामा जिब्रो काटिएर फोक्सोमा रगत पुगी मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्ने भएकाले यस्तो गर्नुपर्छ । रिकभरी पोजिसनमा नराखेको खण्डमा श्वास रोकिएर मानिसको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । बेहोस भएको खण्डमा कहिल्यै पनि नाक थुन्ने, पानी खुवाउन खोज्नेलगायतको गतिविधि गर्नु हुँदैन ।
सिपिआर गर्नुस् कार्डियो क्यारेस्टका कारण बोहेस भई विश्वमा धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । यसरी बेहोस भएका मानिसलाई लाइभ सपोर्ट नगरेको अवस्थामा तत्काल मृत्यु हुन सक्छ । त्यसैले सिपिआरबारे जान्न जरुरी हुन्छ । सिपिआर गर्दा पहिला बिरामीलाई भुइँमा सुताउनुपर्छ । र, एउटा हातमाथि अर्को हात राखी औँला छिराएर हत्केलाले छातीको बीच भागमा थिच्नुपर्छ । प्रतिमिनेट सयदेखि एक सय २० पटक दुई इन्च तलसम्म थिच्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा श्वासप्रश्वासबारे पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात् एक सेकेन्डभित्रै नाक बन्द गरेर मुखबाट कृत्रिम श्वास दिनुपर्छ । यस्तो श्वास दिँदा छाती माथि उठेको देखिनुपर्छ । यसो गर्‍यो भने मानिसको बाँच्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।
र, यो पनि मानिस कसरी वा किन बेहोस भएको हो भन्ने कुराको पनि जानकारी पाउन जरुरी हुन्छ । आँखाको अस्वाभाविक चाल, हातखुट्टा चलिरहेको छ र रक्तसञ्चार पनि छ भने छारेरोगको कारणले बेहोस भएको बुझ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजाने, घाँटीमा केही बेरिएको भए निकालिदिने गर्नुपर्छ । मानिसको बेहोसीको कारण थाहा पाउन एबिसीबारे जान्नुपर्छ । श्वासमार्ग आर्थात् घाँटीमा अवरोध भए/नभएको, ब्लिडिङ र ब्लड सर्कुलेसन र सिम्पल फेन्टिङ एट्याक अर्थात् सामान्य तरिकाले बेहोस भएको अवस्थामा फ्यान चलाइदिने, पानीले अनुहार पुछिदिनेलगायतका गतिविधि गर्नुपर्छ । हृदयाघातका कारण भएको हो भने सिपिआर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरेका युवाको लडेर मृत्यु
योगेशका अभिव्यक्तिप्रति ओलीको यस्तो प्रतिकृया
तुल्सी अर्याल/काठमाडौं । भदौ ६ गते देखि सरकारले ट्याक्सी चालकलाई पहेलो रंगको ड्रेस कोड अनिवार्य रुपमा...
के हो डिएनए ? यसले कसरी काम गर्छ ?
डिएनएबारे निकै सुनिन्छ । कसैको आमा–बाबु पत्ता लगाउन पनि डिएनए गर्ने प्रचलन विश्वभर छ । तर,...
कुकुरका कारण ५० वर्षको जेल सजाए टर्यो
अमेरिकाको ओरेगनमा सन् २०१७ मा जोशुआ हार्नरलाई अदालतले बाल यौन शोषणको मामलामा दोषी ठहर गर्यो ।...
अन्डा पहिलो आयो कि कुखुरा ? यस्तो छ निष्कर्ष
सदियौँदेखि उठिरहेको प्रश्नमध्ये एक हो, दुनियाँमा अन्डा पहिला आयो कि कुखुरा रु यो प्रश्नले सर्वसाधारणमात्र होइन...
महिलाको दाह्री नआउनुको कारण यस्तो रहेछ
पुरुष र महिलामा ठ्याक्कै देखिने फरक भनेको दाह्री हो । पुरुषमा दाह्री आउँछ तर महिलामा आउँदैन । महिलाको...
इण्डोनेशियाको एक जिल्लामा महिला पुरुष सँगै बसेर खान पनि प्रतिबन्ध
इण्डोनेशियाको आचेह प्रान्तको एक जिल्लामा महिला र पुरुषलाई सँगसँगै बसेर खाना खान प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।...
September 05, 2018 Annapurna TV 0
तपाइलाई थाहा छ ? आँपको पातले यी रोगहरु निको पार्छ
आँप सबै उमेर समूहले रुचाउने फल हो । हामी सबैको रोजाइमा आँप पर्ने भएपनि आँपको पातका...
September 04, 2018 Annapurna TV 0
नारीलाई बुझ्न कठिन हुन्छ । महिलाहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल...
खाली पेटमा लसुन खानुहोस्, यस्ता छन् फाइदै फाइदा
तपाइलाई ग्याष्ट्रिकको समस्याले सताएको ? अथवा शरीरको कुनै भाग सुन्नीएर हैरान हुनुभएको छ ? अब चिन्ता...
तपाइलाई थाहा छ ? रिठ्ठाले दम निको पार्छ (विस्तृतमा)
नेपालका गर्मी स्थानमा जताततै पाइन्छ रिठ्ठा । गाउँघरतिर रिठ्ठलाई तौलेर किलोको हिसाब गरि बेच्ने चलन छ...
पेटको बोसो घटाउन यी सात खानेकुरा खानुहोस्
लसुन एक प्राकृतिक एन्टी बायोटिक औषधि हो । यसले सुगरलाई नियन्त्रित गर्ने काम गर्छ । लसुनले...
नीलो जिन्स लगाए कठोर श्रम गर्नुपर्ने
जिन्स किन्न जाँदा नीलो जिन्समा आँखा नजाने सायद कमैको होला । अहिलेको युवा पुस्ताको रोजाइको पहिरन...
सामाजिक सञ्जालमा यस्तो फोटो राखिन् अमेरिकन गायिका सेलेनाले
अमेरिकन गायिका सेलेना गोमेजको बिकिनी लगाएको तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी छिन् । २६ औँ जन्मदिनका...
अब फेसबुक भिडियोबाट पनि पैसा कमाउन सकिने, हेर्नुहोस् यसरी
काठमाडौं । अहिले विश्वका धेरै मुलुकहरुमा युट्वमा भिडियो बनाएरै पैसा कमाइरहेका छन् । नेपालमा पनि युवाहरुको...
विहे भएको ४ वर्ष भयो, सम्भोग पनि हुन्छ, अझै भर्जिन ! कसरी सम्भव भयो ?
महिलाको कुमारित्व कहिले सम्म रहन्छ ? सामान्य अर्थमा कुनै पुरुषसँग सम्भोग नगरेसम्म महिलाको कुमारित्व रहन्छ भन्ने...
नियमित महिनावारी भएन ? यसकारण हुनसक्छ
तपाइको महिनावारी अनियमित रुपमा हुन्छ ? के कारणले महिनावारी अनियमित हुन्छ थाहा छ तपाइलाई ? महिलाको...
श्रीमतीको हत्या गरेर शव फ्रिजमा राख्ने श्रीमानलाई मृत्युदण्ड
चीनको संघाइमा आफ्नै श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै एक युवकलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ । चइनाडेलीले...
बिर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो ? (भिडियोसहित)
नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्णले फरक स्वादका भिडियो सामग्री दिँदै आएको छ । त्यसै अन्तर्गत...
चन्द्रमामा पानी भएको पुष्टि, धेरे ठाउँमा सूर्यको प्रकाश पनि पुग्दैन
कुनै पनि प्राणीको अस्तित्व रहे नरहेको पत्ता नलागे पनि चन्द्रमामा पानी रहेको वैज्ञानिकहरूले दाबी गरेका छन्...
तपाईले १ कप कफीलाई कति तिर्नुहुन्छ ? ५०, १०० वा १ सय ५० । तर भेनेजुएलामा...
एउटा यस्तो जीव जुन ३० वर्षसम्म भोकै बाँच्छ
समुद्र भित्र कयौँ यस्त अनौठा जीव रहेका हुन्छन् जसलाई देखेर तपाईँ पनि चकित पर्नुहुन्छ । समुद्रमा कति...